Akụkọ - Chọpụta ọtụtụ ihe mgbakwunye nri
Onye na -ahazi acid: ụtọ na ụtọ bụ m
Iji nweta nri nwere agba mara mma, ụtọ, na ụtọ, ụtọ nri adịghị mkpa. Aciditor regulator bụ ụdị ihe na -esi ísì ụtọ, nke a na -akpọkwa onye na -egbu egbu. Ịtinye ihe na -egbu egbu na nri nwere ike inye ndị mmadụ mkpali na -enye ume ọhụrụ, mụbaa agụụ, ma nwee mmetụta antiseptik ụfọdụ.
A na -ekekarị ya na acid inorganic na organic acid. Acid inorganic acid a na -ejikarị eme nri bụ acid phosphoric, na organic asịd ndị a na -ejikarị bụ:citric acid, lactic acid, acetic acid, tartaric acid, malic acid, acid fumaric, ascorbic acidgluconic acid, wdg.
Phosphoric acid nwere ike dochie acid citric na malic acid na ụlọ ọrụ ihe ọ beụ beụ, ọkachasị dị ka onye na-egbu egbu na ihe ọ nonụ nonụ na-abụghị mkpụrụ osisi ebe citric acid adịghị mma. Enwere ike iji ya dị ka onye na -ahazi pH na ụlọ ọrụ na -emepụta biya, yana dị ka ihe na -edozi nri na -eko achịcha n'ime ụlọ ọrụ na -eko achịcha iji kwalite uto nke sel sel. Enwere ike iji ya yana antioxidants na abụba anụmanụ, enwere ike iji ya dị ka onye na -akọwapụta mmiri sucrose na usoro mmepụta shuga.
Citric acid dị na anụ ahụ na anụ ahụ na mmiri ara ehi, na mkpụrụ osisi citrus nwere ọdịnaya dị elu. Crystalline citric acid bụ ihe na -acha ọcha transperent ma ọ bụ ọcha crystalline ntụ ntụ. Mmiri citric na -egbu egbu bụ kristal na -enweghị ụcha ma ọ bụ ntụ ntụ ọcha, enweghị isi na enweghị ụtọ. Citric acid bụ ihe na -atọ ụtọ ma na -agbanwe agbanwe. Ọ nwere nnukwu solubility na ike chelating siri ike nke ion metal. Na mgbakwunye na a na -eji ya dị ka onye na -egbu egbu na nri, a na -ejikwa citric acid dị ka ihe nchekwa, synergist antioxidant, pH adjusters, wdg. Oke onunu ogwu dabere na mkpa mmepụta nkịtị, ADI enweghị oke.
A chọtara lactic acid na bred, ya mere aha ahụ. Enwere ike iji nri lactic acid (ọdịnaya 50%) dị ka ihe na -atọ ụtọ na ihe ọ softụ softụ dị nro, ihe ọ yoụ yoụ yogọt, mmanya sịntetik, mmanya sịntetik, soy sauce, pickles, wdg. nke sizinin, mana nwekwara mmetụta nke igbochi uto nke nje bacteria.
Malic acid dị na apụl, yabụ aha ahụ. Ọ nwere uto utoojoo dị nro ma na -adịte aka. Na tiori, ọ nwere ike dochie anya citric acid kpamkpam na nri na ihe ọveraụ. N'okpuru ọnọdụ nke inweta otu mmetụta ahụ, nkezi usoro onunu ogwu bụ 8% -12% na-erughị citric acid (obere akụkụ). Karịsịa, a na-eji malic acid na nri nwere mkpụrụ osisi, ihe ọ carbonụ carbonụ, wdg, nke nwere ike melite ụtọ mkpụrụ ya nke ọma. Na United States, a na -eji malic acid eme ihe mgbe niile na nri ọhụrụ. Oke kacha dị ka mkpa nrụpụta nkịtị si dị, na ADI achọghị iwu pụrụ iche.
Nchekwa: Ka oge anọ a nọrọ na nchekwa ma bụrụ ndị nkuchi n'oge
Ndị na -echekwa ihe, dị ka aha ya na -egosi, bụ ihe mgbakwunye nri a na -eji edobe nri na -emebi emebi dị ka akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi na anụ. N'ihi ihe eji echekwa ihe, soseji ham, soseji, anụ esi nri mkpọ na nri ndị ọzọ a na -ere na nnukwu ụlọ ahịa nwere ike idobe ụtọ ha ogologo oge; n'ihi ihe eji echekwa ihe, anyị nwere ike rie nri dị anya eburu site na ebe ndị ọzọ n'afọ niile. Akwụkwọ nri ọhụrụ na mkpụrụ osisi.
Nchekwa nri a na -ejikarị eme nri gụnyere benzoic acid, butylhydroxyanisole na dibutylhydroxytoluene. N'ime ha, butyl hydroxyanisole bụ ezigbo nchekwa, ọ naghịkwa egbu egbu n'ime oke oke oke. Oke kachasị na nri ekwesịghị gafere 0.2 g/n'arọ nke abụba. Mgbe usoro onunu ogwu ya bu 0.02%, o kariri 0.01%. Mmetụta antioxidant na -abawanye site na 10%. Dị ka antioxidant na-agbaze abụba, hydroxyanisole butylated dị mma maka nri mmanu na nri nwere abụba. N'ihi ezigbo nkwụsi ike ya, enwere ike iji ya n'okpuru ọnọdụ eghe ma ọ bụ achịcha.
N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, nyocha banyere ihe nchekwa anụ ahụ adọtala nnukwu nlebara anya site n'aka ndị ọkà mmụta sayensị si n'akụkụ ụwa niile, ndị mmadụ na -anabatakwa ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ngwaahịa nchekwa ihe dị ka tii polyphenols, vitamin E eke, polylysine na chitosan.
Banyere mkpụrụ osisi anyị na -azụta na ndụ anyị kwa ụbọchị, ndị ọkachamara na -atụ aro na ọ bụrụhaala na azụmaahịa na -eji ihe nchekwa echekwara nke ọma, ndị na -azụ ahịa ekwesịghị ichegbu onwe ha gbasara okwu nchekwa.
Ndị na -echekwa ihe: gbatịa ndụ nri nri
Nchekwa nri nwere ike igbochi ọrụ microbial, gbochie nri imebi na imebi, si otú a na -agbatị ndụ nri nri. Ọtụtụ ihe ọ andụ beụ na nri ndị a kwakọbara na -achọ ịchekwa ogologo oge, a na -agbakwụnyekwa ihe nchekwa nri. Dịka o siri metụta ahụike ndị mmadụ, ihe nchekwa nri bụ nke amachibidoro n'etiti ụdị nchekwa niile.
obodo m akwadola ihe karịrị ihe nchekwa iri atọ akwadoro, nke ha niile bụ obere nsí ma dịkwa nchebe. Tupu akwadoro ha maka ojiji, ha emeela ọtụtụ nnwale nyocha sayensị, gụnyere nri anụmanụ, nsị na nyocha nsị na njirimara, ekwenyekwara na ha agaghị ebute ahụ mmadụ nnukwu ihe, subacute ma ọ bụ adịghị ala ala.
A na -ejikarị benzoic acid eme ihe, sodium benzoatesorbic acid, potassium sorbate, calcium propionate, wdg N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị na-echekwa ihe oriri amalitela ịzụlite na ntuziaka nchekwa, nri, na enweghị mmetọ. Ihe nchekwa ọhụrụ dị ka glucose, oxidase, protamine, lysozyme, nje lactic acid, chitosan, ngwaahịa mbibi pectin, wdg apụtala. Ma steeti akwadoro maka ojiji.
N'ezie, ọ bụrụhaala na a na -achịkwa oke, oke na oke nchekwa nchekwa nri nke ndị na -emepụta nri na -eme n'ime oke akọwapụtara na ọkọlọtọ mba "ụkpụrụ ịdị ọcha maka iji ihe mgbakwunye nri", ọ nweghị ihe ga -emebi ahụike mmadụ. na ndị mmadụ nwere ike nwee obi ike oriri.
Dịka ọmụmaatụ, nri a na -ahụ n'ahịa na -enwekarị ihe nchekwa dị ka potassium sorbate na sodium benzoate. Ihe nchekwa nchekwa abụọ a na -ejikarị na -apụkarị na mmamịrị ọ bụghị n'ime ahụ mgbe ahụ mmadụ gbachara ya. Kpọkọtanụ.
Ọ bụrụ na enweghị ihe mgbakwunye nri
Ọ bụrụ na enweghị antioxidants,
Nri mmanu, ma ọ bụ anụmanụ anụ ahụ na abụba ihe oriri ma ọ bụ nri eghe, ga -ebute oke mmiri n'ihi ọxịdashọn n'ime obere oge. Ndị na -emepụta ihe nwere ike ighe ma ree ha. Ndị nkesa ga -emelite shelves ha kwa ụbọchị. Ndị na -eri ihe na -efunahụ mmetụta nke nchekwa ha karịa. Ụgbọ njem nri dị anya ga-abụkwa ihe na-agaghị ekwe omume.
Ọ bụrụ na enweghị nkwadebe enzyme,
Achịcha steamed nke ndị China na -eri agaghị adị nro ma na -atọ ụtọ dịka ọ dị taa. Ndị Europe nwere ike iri achịcha siri ike dịka ha mere n'oge emepechabeghị emepe. Naanị ihe ndị mmadụ nọ n'ụwa nwere ike ịtụkwasị obi bụ acid afọ ha na mmiri mmiri.
Ọ bụrụ na ọ nweghị onye na-ada ụda-
Soseji ham, soseji, na anụ esiri esi nri ga -ahapụ tebụl anyị, n'ihi na mfu nke ihe ọ juiceụ originalụ mbụ mgbe a na -eme ya na -atọ ya ụtọ ka ọ na -ata ata; azụ, oporo na nri mmiri ndị ọzọ enweghị ike imeju agụụ nke ndị bi n'ime, n'ihi na protein ga -efu na usoro nchekwa oyi. Denaturation na kefriza na -agbaze ọnwụ dị elu; ihe kacha dị mwute bụ na anyị na -efufu mmiri, anyị enweghịkwa ike iri noodles ozugbo.
Ọ bụrụ na enweghị ihe nhazi nri-
N'oge anwụ na -ekpo ọkụ, ice cream anyị hụrụ n'anya ga -ejupụta na nsị ice n'ime friji. Ọ bụ ihe ọmịiko iri ihe dị ka mkpụrụ akpụrụ mmiri; obu ihe nwute itufu; mmiri ara koko, mmiri ara ihe ọ fruitụ fruitụ mkpụrụ osisi, yogọt sterilized, yogọt dị iche iche kpaliri, mmiri ara ehi na -arụ ọrụ, wdg.
Ọ bụrụ na enweghị emulsifier——
Ihe ọ milkụ milkụ mmiri ara ehi na mmiri oyi akwa pụtara na ihe ọgesụgesụ. Sugar dị na ngwaahịa chọkọleti dị mfe ịkwa akwa, achịcha adịghị mfe ịchekwa, margarine na nri mkpọ na -anọpụ iche na mmanụ na mmiri, na toffee na afụ chịngọm dị mfe ịfụfụ na ịrapara na ezé.
Ọ bụrụ na enweghị onye na-eko achịcha-
Ahịhịa steamed nke ndị ugwu ugwu hụrụ n'anya ga -ala azụ ịhapụ, na achịcha ndị ndịda ndịda na -amasị ga -asị ka ha nọrọ nke ọma. Ndị mmadụ nọ na mba ahụ niile ga -asị ka ha nọrọ nke ọma na mkpisi mgwakota agwa e ghere eghe erila afọ 900.
Na nkenke, ọ bụrụ na enweghị ihe mgbakwunye nri, a gaghị enwe ụlọ ọrụ nri ọgbara ọhụrụ nke mepere emepe nke ukwuu, a gaghịkwa enwe ndụ ọgbara ọhụrụ dị elu.
Isi mmalite: Nkeji edemede site na nri mbụ
Oge ezipụ: Jul-16-2021